သတင်းဆောင်းပါး | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 84
ဗုဒ္ဓေါဝါဒဆရာတော် ဒီဇင်ဘာ ၁၊ ၂၀၁၂ မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်းမှာ ရဟန်းသံဃာတွေရဲ့ အပိုင်းကိုကြည့်လိုက်ရင် အကြမ်းမဖက် ငြိမ်းချမ်းသော နည်းလမ်းဖြင့်သာ တော်လှန်ရေး သ မိုင်းစာမျက်နှာကို ဖွင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဘုရားသားတော်များ ဗုဒ္ဓအဆုံးအမတိုင်း လောကတ္ထစရိယ၊ဉာတတ္ထစရိယ လောကသူသားများရဲ့ အကျိုးစီးပွားအရေးကို အလေးထားဦးစားပေးပြီး ဓမ္မလမ်းကြောင့်ဖြင့် ချီတက်ခဲ့သည်မှာ သာသနာနှစ်ပေါင်း ၂၅၅၆ သို့ပင် ရောက်ရှိလာ ခဲ့ပါပြီ၊၊ ရဟန်းသံဃာများအပေါ်ကို ကြည်ညိုချင်ဟန်ဆောင်ထားတဲ့ စစ်အစိုးရအနေဖြင့် ဘယ်လောက်ပင် ဟန်ဆောင်ကောင်းစေ သံဃာများက ပြည်သူလူထုဖက်ကရပ်တည်ပြီး အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်လာရင် စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်ဆိုသလို အကြမ်းဖက် သတ်ဖြတ် ထောင်ချ မူတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာ ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင် သံဃာ့တော်လှန်ရေးက သက်သေဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။ အခုလည်း မုံရွာတဖက်ကမ်း ကြေးနီတောင် စီမံကိန်းဟာ ရဟန်းရှင်လူကျောင်းသားပြည်သူများ ဆန္ဒမပါဘဲ စစ်အစိုးရက လုပ်ခဲ့တာမို့ အရပ်သား...
အနောက်ကမ္ဘာနဲ့ အစ္စလမ်လောကသားတို့ ရခိုင်အရေးမှာ ဘာလို့ တစ်သံတည်း ထွက်ကြသလဲ ကျော်ဇော်ဦး၊ Coral Arakan News၊ ဘာသာပြန်သည်၊ ၂၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂ ၊ Coral Arakan News ၊ (Photo – မြောက်ဦးမြို့ အလိုတော်ပြည့်ကျောင်း ရှိ ဒုက္ခသည်များက အလှူရှင်များအား အပြန်တွင် လှမ်းငေးနေကြပုံ) (Fuadi Pitsuwan ရေးသား၍ ကျော်ဇောဦး ဘာသာပြန်သည်။ ရှုမြင်သုံးသပ်ချက် ရပ်တည်ချက်တို့မှာ မူရင်းဆောင်းပါးရှင်၏ အာဘော်သာဖြစ်ပါသည်။) အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားရဲ့ အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ထောမတ်စ် ဒွန်နီလွန် က အိုဘားမား ကို ပြောတယ်။ မြန်မာသမ္မတဦးသိန်းစိန် နဲ့ အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်...
မောင်ကျေးရေ (ခေတ္တကယ်လီဖိုးနီးယား) နိဝင်ဘာ ၁၂ ရက်၊၂၀၁၂ ● စကားဦး ကျေးရွာရေရရှိရေးလုပ်ငန်းများကို လွတ်လပ်ရေးရပြီးခေတ်ကစ၍ ၁၉၉၅ ခုနှစ်အထိနှိင်ငံတော်အစိုးရ၏ ကျေးရွာရေရရှိ ရေးဌာန၊ဌာနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတစ်ရပ် အနေနှင့်ကျေးလက်ဒေသနေပြည်သူများသန့်ရှင်းသောေ သာက်သုံးရေရရှိရေးအတွက်မြေအောက်ရေတူးဖေါ် ရရှိနှိင်မည့်နေရာဒေသများတွင် စက်ရေတွင်းများတူးဖေါ်ပေးခြင်း၊မြေအောက်ေ ရတူးဖေါ်ရန်ခက်ခဲသည့်ဒေသ၊တူးေ ဖါ်၍မရနှိင်သည့်ဒေသများအတွက်အနီးအ နားဝန်ကျင်ရှိမြေပေါ်ရေအရင်းအမြစ်များမှရေကိုရေသွယ်ပိုက်ဖြင့်သွယ်ယူဖြန်ဝေပေးခြင်း၊ (ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊တောင်ဇင်းရေပေးဝေရေး)လုပ်ငန်းများကို မန္တလေးတိုင်း၊မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊ဧရာဝတီတိုင်းတို့တွင်စနစ်တကျ၊တတ်ကျွမ်းနားလည်သည့်ပညာရှင်များ ကဦးဆောင်ပြီးလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ထိုစဉ်ကဖြန့်ဝေပေးသည့်သောက်သုံးရေ၊အရည်အသွေးကိုအမျိုးသားကျန်းမာရေးဓါတ်ခွဲခမ်း(National Health laboratory) ကတာဝန်ယူ စမ်းသပ်ပေးခဲ့ပါသည်။ စက်ရေတွင်းပေါင်း ထောင်ကျော်ကိုတိုင်းအလိုက်မှတ်တမ်းများစနစ်တကျ ထားရှိခဲ့ကြပါသည်။(ထိုမှတ်တန်းများကကျေးရွာရေရရှိရေးစီမံကိန်း၊ကနဦးလုပ်ငန်းများကိုအထောက်အကူပြုခဲ့ပါသည်) No tags for this post. Related posts No related posts.
အိုဘားမားအနိုင်ရပြီး ၂၀၁၂ ရွေးကောက်ပွဲအလွန် အမေရိကန်ပြည် ဘာလဲ၊ ဘယ်လဲ နိုင်ငံတကာသာဂိ၊ နိုဝင်ဘာ ၈၊ ၂၀၁၂ ၂၀၁၂ အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်း ရေးဖို့ ၂၀၁၀ ကတည်းက တာဝန်ယူထားသော်လည်း ၂၀၁၂ အနီးကပ်မှ အတော်တွန်းရေးဖြစ်တယ်။ မရေးလိုက်မိလို့ နောက်မှ လိုက်ရေးရရင် ဖြစ်ပျက်သမျှ အမှတ်ရသမျှတွေ မစုံလင်မှာ စိုးတာလည်း ပါတယ်။ မတော်တဆ အိုဘားမားများ ရှုံးသွားခဲ့ရင် ငါ မရေးခဲ့မိလေခြင်းဆိုပြီး စိတ်နာမိမှာလည်း စိုးတယ်။ အခုတော့ အိုဘားမား နိုင်သွားပြန်တော့ အင်း … ငါရေးမိတာတွေ တော်သေးတာပေါ့လေလို့ စိတ်သက်သာရပါတယ်။ စာရေးတဲ့ သက်တမ်းတလျောက်လုံး မြန်မာပြည်နဲ့ ပတ်သက်နဲ့ ဆောင်းပါးတွေဆိုတာ အနိုင်ရတဲ့ဖက်က တခါမှ ရေးခဲ့ဖူးတာ မရှိဘူး။ အရှုံးနဲ့ ရင်ဆိုင်ရသမျှတွေ...
USက မြန်မာတွေ သမ္မတအတွက် မဲပေးပြီးပြီလား? မိုးမခ၊ နိုဝင်ဘာ ၆၊ ၂၀၁၂ ယနေ့ အမေရိကန်စံတော်ချိန် နံနက်ခင်းက စပြီးတော့ ၂၀၁၂ အမေရိကန်အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ သမ္မတရွေးချယ်ပွဲ စတင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေအပါအ၀င် သတင်းမီဒီယာပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ အမေရိကန်ပြည်သူ မဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့ မဲရလဒ်တွေကို အချိန်နဲ့ တပြေးညီ တင်ဆက်ပေးနေတာကို တွေ့ရပါတယ။် ဖေ့စ်ဘွတ်ဆိုရှယ် မီဒီယာက http://www.facebookstories.com/vote အဲသည်လင့်ခ်မှာ အမေရိကန်တွေ ဘယ်နှယောက် မဲပေးပြီးပြီဆိုတာကို တင်ဆက်ပေးနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဂူးဂဲကလည်း http://www.google.com/elections သည်နေရာကနေ သတင်းတွေ အချက်အလက်တွေ စုဆောင်းတင်ပေး နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အမေရိကန်အရှေ့ဖက်ကမ်း စံတော်ချိန် ညနေ ၆ နာရီလောက်ကစပြီးတော့ ပြည်နယ်အလိုက် မဲဆန္ဒ ရလဒ်တွေကို သတင်းဌာနတွေကနေ...
သက်တံပေါ်က မာမာအေးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း ၀င်းငြိမ်း/ရွှေအမြုတေ မဂ္ဂဇင်း နိုဝင်ဘာ ၃၊ ၂၀၁၂ ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတိုင်ခင် တုန်းက ကျွန်တော်တို့ မဂ္ဂဇင်း၊ ဂျာနယ် စာမျက်နှာများ ပေါ်မှာ အစိုးရက Black List သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ အမည်များကို ပင်လျှင် ဖော်ပြခွင့် မရှိတာကြောင့် မဖြစ်မနေ အဲဒီလူတွေ ရဲ့နာမည်ကို ဖော်ပြဖို့ လိုအပ်လာရင် အနုပညာ နာမည် မသုံးဘဲ နာမည်ရင်းများနဲ့ လှည့်ပတ် သုံးကြရ ပါတယ်။ ဒါလည်း စာပေစိ စစ်ရေးက နာမည်ရင်းကို သိတယ်ဆိုရင် “အဲဒါ ဘယ်သူ့ကိုပြောတာ မဟုတ်လား။ ဖြုတ်ပါ” ဆိုတဲ့ အမိန့်များကြောင့် Tags: ရခိုင်...
ဆန်ဒီမုန်တိုင်းအလွန် နယူးယောက်၊ နယူးဂျာဆီ နဲ့ အခြားပြည်နယ်အခြေအနေများ နိုင်ငံတကာသာဂိ၊ နိုဝင်ဘာ ၂၊ ၂၀၁၂ အောက်တိုဘာ ၂၉ ၊ ၃၀ မှာ ဆန်ဒီဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း အမေရိကန်ပြည်အရှေ့ဖက်ကမ်းခြေ၊ နယူးယောက်မြို့တော်၊ နယူးဂျာဆီပြည် (ဂျာဆီနဲ့ အတ္တလန်တာမြို့) တွေကို ဖြတ်ပြီး ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ရေကြီးခြင်း၊ မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် ပျက်စီးခြင်း၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများ ရပ်ဆိုင်ခြင်းတို့ဖြင့် အရှေ့ဖက်ကမ်းဒေသတွေက ပြည်နယ်ပေါင်း ၁၂ နယ်ကို ထိခုိုက်ခဲ့ရာမှာ ပျက်စီးမှု ဒေါ်လာ ၅၀ ဘီလျံဖိုးလောက်ရှိမယ် ခန့်မှန်းပါတယ်။ သေဆုံးသူ ၉ ၀ ကျော်သွားပြီး လူပေါင်း ၄.၁ သန်းကျော်ရဲ့ နေအိမ်တွေ လုပ်ငန်းတွေမှာ လျပ်စစ်မီးပြတ်တောက်လျက်ရှိပါတယ်။ နယူးယောက်မြို့တော်မှာတင် လူ ၆ သိန်းခွဲ မီးပြတ်တောက်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။...
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အနောက်တံခါးကို လှည့်ကြည့်ခြင်း ခိုင်လင်း(မေဃ၀တီ)၊ အောက်တိုဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၂ ဘင်ဂါလီ-ရိုဟင်ဂျာ အမည်ခံ ဘာသာရေးအစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ ပန်းတိုင်ဟာ တိုင်းပြည်ဖဲ့ထုတ်ရေးဖြစ်တယ်။ ဖဲ့ထုတ်လို့ ရရင် သီးခြား နိုင်ငံဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ သို့မဟုတ် အခြားဘာသာရေးအစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်တွေရှိတဲ့ နိုင်ငံတခုနဲ့ပူးပေါင်းချင် ပူးပေါင်းလိမ့်မယ်။ အဓိကပန်းတိုင်က တိုင်းပြည်ဖဲ့ထုတ်ရေးဖြစ်တယ်။ အဲဒီလို ဖဲ့ထုတ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေ အောင်မြင်ရေးအတွက် ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းဖြစ်ပေါ်ရေးဟာ ဘာသာရေးအစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်သမားတွေအတွက် အရမ်းလိုအပ်တဲ့ ဗျူဟာတခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ဂျွန်လက ကျနော့်ရေးတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အနောက်တံခါး တကယ်ကျိုးပျက် သွားပြီလားဆောင်းပါးမှာ ထောက်ပြခဲ့ဖူးတယ်။ ဆိုလိုတာက အဲဒီ တိုင်းပြည်ဖဲ့ထုတ်ရေးပန်းတိုင်အတွက် ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းဖြစ်ပေါ်ရေး နည်းဗျူဟာကို မဖြစ်မနေ လုပ်ဆောင်လာလိမ့်မယ်လို့ကြိုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ ဘာသာရေးအစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်သမားတွေဟာ ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းဆီကို မောင်းနှင် နေတယ်လို့ ပြောချင်တယ်။ အဲဒီလို...
၂၀၁၂ အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲပေးတဲ့သူတွေ နိုင်မှာပဲ နိုင်ငံတကာသာဂိ၊ အောက်တိုဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၂ အိုဘားမားနဲ့ မစ်ရော်နီ ဘယ်သူလဲ ၂၀၁၂ နိုဝင်ဘာ ၆ မှာ အမေရိကန်သမ္မတနဲ့ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမယ်။ လက်ရှိသမ္မတအိုဘားမားနဲ့ အတိုက်အခံပါတီ ရီပတ်ဘလစ်ကန်သမ္မတလောင်း မစ်ရော်နီတို့ အကြိတ်အနယ် ယှဉ်ပြိုင်နေကြတယ်။ ရုပ်မြင်သံကြားမှာ ၃ ကြိမ်တိုင်တိုင် သမ္မတအရွေးခံလိုသူ ၂ ဦး စကားစစ်ထိုးခဲ့ကြပြီးပြီ။ လက်ရှိမှာ အိုဘားမားက စကားရည်လုတဲ့ဆီမှာ အသာရနေတယ်လို့ ဆိုတယ်။ ပါတီစွဲသူတွေကတော့ သူတို့သမ္မတကို သူတို့ မဲပေးမှာပဲ။ ပါတီစွဲမထားသူတွေကတော့ နောက်ဆုံးအချိန်အထိ စဉ်းစားတုန်းလို့ ဆိုတယ်။ အဲသည် ဝေခွဲမရသေးတဲ့ မဲဆန္ဒရှင်အရေအတွက်က မဲပေးသူ လူဦးရေရဲ့ ၃ % ကနေ ၅...
Page 84 of 89«1...8283848586...89»
မောင်မောင်စုိုး - တရုတ်မီဒီယာ
လူကုန်ကူးခြင်း၊ လူပွဲစားနှင့် မြန်မာလူငယ်များ
ကာတွန်း မင်းထက်လူရဲ့ ထမင်းငတ်တော့မယ် ဆရာတို့ရယ် … https://t.co/99ibzNA03D https://t.co/ZAATA5EsyA about3hours ago ReplyRetweetFavorite
ဆောင်းယွန်းလ ● ရေလောင်းမိခဲ့တဲ့ အဆိပ်ပင်တွေအကြောင်း https://t.co/2m2fCVcCGq https://t.co/UCA14F3P5a about3hours ago ReplyRetweetFavorite
စိုးခိုင်ညိန်း ● မြို့ပြရန်ကုန် https://t.co/J2mwTk28US https://t.co/wY4lppLMAW about5hours ago ReplyRetweetFavorite
ကာတွန်း ရာဇာသာစည်ရဲ့ အပျော်တမ်းအဖွဲ့ https://t.co/KmQHjtnMgA https://t.co/63RzNlYDOL about6hours ago ReplyRetweetFavorite
ဇော်အောင် (မုံရွာ) ● မြန်မာလျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာန စံနမူနာယူရမဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျ https://t.co/qFXVYoxLc3 https://t.co/frceyETqi0 about6hours ago ReplyRetweetFavorite